आजको पत्रपत्रीका बाट Archives - Page4of 151 -
Saturday October 16, 2021 |
फेसबुक लाइभ गरेर युवतीद्वारा आत्महत्या
चितवन । चितवनमा एक युवतीले फेसबुक लाइभ गरेर आत्महत्या गरेकी छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१० स्याउलीबजारमा शनिबार एक युवतीले फेसबुक लाइभ गरेर आत्महत्या गरेकी हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार कोठा भाडामा लिएर बसेकी १९ बर्षिय विद्या पाण्डेले फेसबुकमै लाइभ गरेर आत्महत्या गरेकी हुन् । उनको स्थाइ ठेगाना भरतपुर...
दिल्ली। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अचानक चिनियाँ सेनासँग भारतीय सेनाको भिडन्त भएको स्थल लद्दाख पुगेका छन् । भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत र सेना प्रमुख एमएम नाराभाने पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँगै छन् । नाराभाने यसअघि नै त्यस क्षेत्रमा पुगिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदी भिडन्तपछि पहिलो पटक लद्दा...
‘भारतले छिमेकीलाई ध्यान नदिँदाको फाइदा उठाउँदै चीन’
एजेन्सी। बंगलादेश कोरोना भाइरसको महामारीसँग लडिरहेको बेला भारतले ध्यान नदिँदा चीनले त्यहाँ अनुदान दिने, चिनियाँ सामग्रीमा कर घटाउनेजस्ता गितिविधिहरु गरिरहेका छन् । "चीनले यस अवसरका लागि लामो समयदेखि कुरिरहेको थियो । बंगलादेश र भारतबीच सम्बन्ध राम्रोसँग अघि बढेको चीनले चित्त बुझाइरहेको थिएन,"भारतका लागि बंगलादेशी उच...
मन्त्रिपरिषद् चार महिनादेखि अपुरो, मन्त्रालयको काम प्रभावित
काठमाडौं । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार विगत चार महिनादेखि अपुरो रहेको छ । चार महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय दोहोरो मन्त्रीको भूमिकामा चलिरहेका छन् । दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका मन्त्रीले समय नदिँदा मन्त्रालयको काम कारबाही भने प्रभावि...
निर्वाचन आयोगमा कसले दर्ता गर्‍यो ‘नेकपा एमाले’ ?
काठमाडौं । नेकपाभित्र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताका लागि निवेदन परेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेर दर्ता भएपछि नेकपा एमाले नामको दल हाल आयोगमा दर्ता छैन । आयोगका प्रवक्ता राजकुम...
१९ वर्षीया युवतीलाई नाङ्गै बनाएर एक्स-रे लिन खाजेपछि…
दाङ । युवतीलाई नाङ्गो बनाउन खोजेको आरोपमा दाङबाट एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन् । स्थानीय गोर्खा हस्पिटलमा एक युवतीलाई नाङ्गै बनाउन खोज्ने एक्स–रे गर्ने प्राविधिक बबई गाउँपालिका–५ का २२ वर्षका नवराज डाँगीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । घोराही लुहासुरस्थित अस्पतालमा एक्स–रे गर्न गएकी १९ वर्षकी युवतीलाई डाँगीले ...
ताली र गालीको केन्द्रमा ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा गाली र तालीको केन्द्रबिन्दुमा छन्। पार्टीभित्र रहेको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन द्विपक्षीय देखिन थालेपछि यो बैठकमा अध्यक्ष ओली आलोचनाको मुख्य निसानामा पर्ने देखिएका हुन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओलीको पार्टी र सर...
नेपाल-चीन सीमा विवाद: सीमास्तम्भ नै गायब
दोलखा । नेपाल–चीन सीमास्तम्भमध्ये दोलखाको उत्तरी भूभागको कोर्लाङपारि पर्ने पिलर नम्बर ५७ गायब छ। नापी विभागले सन् १९९२ मा प्रकाशन गरी सन् १९९६ मा फिल्ड प्रमाणीकरण गरेको स्थलरुप नक्सा (ट्रोपोम्याप)मा उक्त पिलर गायब पाइएको हो। बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगर उता कोर्लाङपारिमा रहेको यो पिलरको अवस्थितिबारे नेपाल र चीनको धारणा बा...
चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण
काठमाडौँ — नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसित वर्षौंदेखि रहेको सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद सुल्झन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी तथा गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको छ । संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा ह...
आज जेठ २७ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०७७ जेठ २७ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ। मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मत...
जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्पक्ष भएनः विपक्षी गठबन्धन